Umsakazi weVuma unxusa ukuba kunakekelwe imvelo
UYISISHOSHOVU sezemvelo ezinkundleni zokuxhumana obuye abe wumsakazi weVuma FM, uJacinta Ngobese. Isithombe esigciniwe: Doctor Ngcobo/ANA
NQOBILE MASIMULA | December 17, 2019
UTHANDO lwakhe lwezemvelo luvela mihla namalanga emakhasini akhe ezinkundleni zokuxhumana, umsakazi weVuma FM, uJacinta Ngobese.
Isimo sezulu ebesingesihle ngeledlule nesidale umonakalo ezweni jikelele, simhlukumezile lo msakazi kangangoba uze wanikela emakhasini akhe eveza ilaka lakhe.
UJacinta unakho ukuveza imibono yakhe ngokungasabi ezinkundleni zokuxhumana njengoba enzile namanje.
“Umhlaba uyakhala ufuna siwunake. Uma lokhu kungakusabisi, angazi yini ezokusabisa. Kumele sinakekele imvelo. Lokhu esikubona manje akusiyo imvelo, ayikho into eyimvelo ngalesi simo sezulu. Konke lokhu kuwumvuzo womonakalo owenziwa yithina njengabantu. Kumele sisukume senze okuthile namhlanje! Ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga siyokusabalalisa lokhu njengalokhu sisabalalisa ezinye izindaba ngoba impilo yethu neyezingane zethu ilele la!.”
Ufundeka kanjena umbhalo wakhe wakamuva kwiFacebook.
Isolezwe ngeSonto libe selimthinta ukuzwa ukuthi kungani enentshisekelo engaka ngezemvelo.
Lo msakazi oshayela uhlelo lwantambama kulo msakazo lapho ehambisana khona noNkululeko Ngcobo odume ngoLekomotion, uthe imphatha kabi le ndaba yokunganaki kwendlu emnyama ekubeni kukhona izinto ezingathi shu abazinakayo.
“Kuyadabukisa ukubona ngisho abantu abanemali beyishaya indiva le nkinga esibhekene nayo yokuguquka kwezimo zezulu. Kusakhona abantu abazitshela ukuthi uma kushisa ngokweqile kuyashisa nje nokungasilo iqiniso,” kuchaza uJacinta.
Uthe enye into ehluphayo ngabantu wukungazijwayezi ukufunda bese kuba nemibono ephikisayo lungekho ulwazi olugcwele lwanoma yini okukhulunywa ngayo.
“Sisenkingeni impela futhi uma singabhukuli sizolokhu sisenkingeni,” usho kanje.
Ngaphandle kwentshisekelo yezemvelo lo msakazi ubuye abe nomcimbi waminyaka yonke, i-We Are One Festival, nokuhloswe ngayo ukuhlanganisa izinhlanga ezehlukene.
“Kuningi okusha esiza nakho kulo nyaka kodwa sizokumemezela kahle uma konke sekusesimeni,” kuphetha uJacinta.